Iindaba-Umsebenzi weQela lokwakha.
Ukulungiselela ukukhuthaza umdla wabasebenzi emsebenzini, ukuseka unxibelelwano oluqinisekileyo, ukuthembana, ukumanyana kunye nentsebenziswano phakathi kwabasebenzi, ukuhlakulela ulwazi lweqela, ukuphucula ukuqonda koxanduva kunye nokuba lilungu labasebenzi, kwaye ubonise isimbo seNkampani yeSanniu, ngoMeyi 29, 2021, Bonke abasebenzi be-Yantai Sanniu Import and Export Co, Ltd. bathathe inxaxheba kwimisebenzi yokwakha iqela.
Ngentsimbi yesi-8 kusasa nge-29 kaMeyi, sonke sahamba ngebhasi saya kwiziko lemfundo esemgangathweni e-Weihai ukuya kuqeqesho lwangaphandle. Uqeqesho lwangaphandle lubekelwe kwinkqubo yoqeqesho lokumilisela amandla eqela, ukukhuthaza ukukhula kombutho, kunye nokusoloko ukongeza ixabiso kuwe. Iseti yoqeqesho lokulinganisa lwangaphandle olwenzelwe ngokukodwa ulwakhiwo lweqela langoku.
Phambi koqeqesho olusesikweni, umqeqeshi kuqala ngokubala kwabo ngokulandelelana ukuze agqibe ukwabiwa kweqela. Emva koko ilungu ngalinye leqela likhetha umphathi, kwaye phantsi kwesikhokelo somphathi, baxoxa ngegama labo leqela, uphawu lweqela kunye nesiqubulo. Sinamaqela amabini, ii-Tigers ezi-orenji kunye nee-Dragons eziluhlaza. Ke phantsi kokhokelo lomqeqeshi, onke amalungu eqela athathe inxaxheba kukhuphiswano nakwimisebenzi, efana neTrust Back Fell, iDrum Life, EscapeWZonke kunye nezinye iiprojekthi. Sonke siqhubele phambili umoya wokusebenza nzima, unyamezelo, singaze sinikezele, kwaye sigqibe zonke iiprojekthi ezinzima. Ngokuhlwa, sasinebhaybeyi ngomlilo wasenkampini, sasela, sacula sadanisa, kwaye sabelana ngamava neemvakalelo zethu.
Usuku lohambo olonwabileyo, nangona uziva udiniwe kakhulu, kodwa wonk 'umntu uvuya kakhulu. Ngalo msebenzi weqela, amalungu eqela aneemvakalelo ezininzi: okokuqala, ukubaluleka kweqela kuyazibonakalisa, ukuba akukho malungu eqela lentsebenziswano yomanyano, iinzame zokudibana, iinjongo ezininzi kunzima ukufikelela kuzo; Okwesibini, ukuzimela ngokudlulileyo sisitshixo sempumelelo, ubunzima buyinyani, boyisile ngokwabo, banike umdlalo ubuninzi belungu leqela ngalinye linyathelo lokuqala lokufumana impumelelo;
Okwesithathu, unxibelelwano lweqela lubaluleke kakhulu, unxibelelwano ngakumbi, ukwabelana ngakumbi, izimvo ezilungileyo kunye nemibono inokuphuculwa, kwaye ekugqibeleni isincede kwelinye icala loyiso. Xa ushiya ibala loqeqesho kwaye ubuyela kwindawo oqhele ukusebenza kuyo, sikholelwa ukuba okoko nje sinika umdlalo opheleleyo kwiqela leqela lokuthembana kunye nokuphatha yonke imisebenzi njengayo yonke imiceli mngeni kuqeqesho, akusayi kubakho bunzima esingenako Ukoyisa kwaye akukho ngxaki singenako ukusombulula!
Ixesha Post: Jul-27-2021
Ikhukhi yeLadyfinger, Umtya weHawthorn, Intonga yeBhontshisi entsha, Iipakethi zesosi yeSoy, Iibhiskithi zaBantwana, Ukutya amandongomane anetyuwa,